Waa Halkee Meesha ugu Kacsiga Badan Dumarka ee ay ka helaan Raaxada Dhabta Ah - shumis.net
→ Waa Halkee Meesha ugu Kacsiga Badan Dumarka ee ay ka helaan Raaxada Dhabta Ah
Waa Halkee Meesha ugu Kacsiga Badan Dumarka ee ay ka helaan Raaxada Dhabta Ah
Jaceylka dhabta ah ee aan marna bur burin waa ka isku darsada jaceyl labada ruux u dhexeya iyo jaceyl ehelka u dhexeya,waxana sababta tahay gabarta aad jeceshahay ehelkiisa inaad u tix galisa sida walidkaga oo kale.
Kuma waajib aha tix galinta waalidka ninka oo kaliya lakiin gabadhana wa inay hooyada iyo abaha lamaanaheeda u dhow3rta sida waalidkeeda waayo xaq ayey ku leeyahiin. Rasuulkeena (csw)waxa uu kula dar darmay qofka muslimka ah inuu ka fiirsadao guurka marka uusamaynayo uuna ku guursado gabadha diinta’lakiin quruxdana waa mid jirta waayo waxa cadan ah qof lagugu dhib sanayo inaadan guursan.
Ruuxa jacelka aad u qaado hadii qoos kiisa ay yahiin kuwa alle ka furtay xata waad xidhi dhinaysaa sida waalidkaga u xidhidhin lahayd. Guud ahaan guurka waa wax qalbiga ruuxa ku dfegayo isla markasina awolad ka dhalanayso waa inaad lamaanaga noqdaa mid xili kasta cawaaqiga jira kula wadagaysa,lakiin yeysan noqon mid lacag guur keeda yahay.